Teny tsara indrindra avy amin'i Alan Sugar - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 9 mn novakiana
Alan Michael Sugar, Baron Sugar, dia mpandraharaha anglisy, olo-malaza amin'ny media, mpanao politika ary mpanolo-tsaina politika. Tamin'ny 1968 dia natombony izay ho lasa orinasam-pandraharahana lehibe indrindra, ny orinasa elektronika mpanjifa Amstrad. Tamin'ny 2007, namidiny ny tombotsoany sisa tavela tamin'ny orinasa tamin'ny fifanarahana tamin'i BSkyB tamin'ny vidiny £ 125 tapitrisa. Sugar dia ny filoha sy tompon'ny Tottenham Hotspur tamin'ny 1991 ka hatramin'ny 2001, nivarotra ny anjarany sisa tavela tao amin'ny klioba tamin'ny 2007 ihany koa, mitentina £ 25 tapitrisa. Mipoitra ao amin'ny andiany fahitalavitra BBC The Apprentice, izay nalefa isan-taona hatramin'ny 2005.
Ny sasany amin'ireo teny faran'izay tsara indrindra avy amin'i Alan Sugar dia voatanisa eto ambany.
“Ny lehilahy iray mahomby dia mametraka ny fitiavana ny vady aman-janany, ny toerana tena lehilahy mahomby amin'ny fiainana dia ny hananana fianakaviana lehibe… ny fananako ankehitriny dia noho ny fitiavan'ity ramatoa ity sy ny fanajako ny zanako telo. isika roa. ” - Alan Sugar
“Ny mpandraharaha dia tsy afaka hitombo; Ny olona iray dia teraka miaraka amina fanahy mpandraharaha ao anatin'izy ireo. ” - Alan Sugar
"Ny faniriana ho mpandraharaha dia tsara kokoa ny fampitsaharana ny fandraharahana." - Alan Sugar
“Aoka ianao ho olona tsara tarehy. Mianara manaja ny anti-panahinao. Hajao ny lalàna ary aza kivy. Ny fakam-panahy dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra amin'ny fiainana. ” - Alan Sugar
“Ny asan'ny mpiasa amin'ny fomba taloha dia tsy misy intsony. Mila manomboka mieritreritra ny hanao zavatra ho an'ny tenany ny olona. ” - Alan Sugar
"Aza miantehitra amin'ny fanjakana rehetra hanampy anao amin'ny fampandehanana ny orinasanao." - Alan Sugar
“Aza manomboka milaza amiko hoe mitovy amiko ianao, satria tsy misy olona toa ahy; Tsy manam-paharoa aho. ” - Alan Sugar
“Aza manameloka an'izao tontolo izao. Ny tsiny fotsiny dia miaraka aminao. Fantaro izany avy hatrany. ” - Alan Sugar
“Aza manahy raha manao fahadisoana ianao satria izany no mianatra ny ankamaroan'ny olona.” - Alan Sugar
"Ny fanahy mpandraharaha dia lainga ao anaty tsy fahatsiarovan-tenan'ny olona maro, ary mila fotoana sy raharahambarotra isan'andro amin'ny orinasa hahalavorary azy izany." - Alan Sugar
“Ny fananana vina dia mikasika ny fampiasana ny sainao an-tsaina, eo amin'ny fanitarana ny atidohanao hieritreretana zavatra hafa. Ny momba ny fanofanana ny tenanao mba hifantohanao amin'izay tianao haleha, inona no tianao hotratrarina. ” - Alan Sugar
“Lazaiko foana fa mila maka izay fangatahana rehetra ianao, zarao roa izy ary esory ny laharana voalohany nieritreretanao, ary mety ho tonga amin'ny zava-misy ianao. Tia olona ny orinasan'izy ireo ary folo ny tsy hijery ny olana sasany izay heverin'ny hafa ho ratsy. - Alan Sugar
"Marary manokana aho ary sasatry ny mihaino ireo lazaina fa mpandraharaha mitaraina momba ny fomba tsy anampian'ny banky sy ny governemanta azy ireo amin'ny orinasany." - Alan Sugar
"Tsy manao fahavalo aho, tsy matahotra ny hitenenako akory, izay indraindray tsy midika hoe tsy tian'ny olona ny zavatra lazaiko." - Alan Sugar
"Niady tamin'ny fahantrana aho ary mbola resy lahatra aho fa afaka manao toy izany koa ny hafa." - Alan Sugar
"Manana finiavana sy fanoloran-tena aho hanandrana sy hanampy ireo orinasa kely sy orinasam-pifandraisana mba hahitana raha afaka mahazo mihetsika indray isika." - Alan Sugar
"Manana fitsipika aho ary tsy voatery hanery azy ireo aho." - Alan Sugar
“Ny fanajana lehibe indrindra ho an'ny vehivavy amin'ny asa aman-draharaha. Ny sasany amin'ireo olona faran'izay tsara indrindra nataoko dia vehivavy. ” - Alan Sugar
“Tsy azoko atao ny mieritreritra hoe diso - miresaka amin'ny olona fotsiny aho mba hivoahana izany, ara-bola na ara-tsosialy. Raha mila namana sy mpiara-miasa vaovao ianao, dia tokony ho izany - tena namana sy mpiara-miasa. ” - Alan Sugar
"Tiako ny ho olona tena tsara tarehy." - Alan Sugar
“Matetika aho no milaza fa tsy maninona na sekoly sekoly alehanao na izay boky novakianao, dia tsy afaka miditra ao Boots ianao ary mividy tavoahangy misy mpandraharaha. Ny toe-tsaina mpandraharaha dia zavatra iray naterakao, tahaka ny talentan'ny mpitendry piano. - Alan Sugar
“Nanomboka tsy nisy na inona na inona aho… Tsy misy antony eto amin'ity tany andriamanitra ity ny antony tsy hahitan'ny olon-kafa an'izao andro izao sy ny vanimpotoana.” - Alan Sugar
"Nanomboka ny asako izay nantsoina hoe 'resa-be.' ... Tsy fantatro hoe inona ny 'resa-betiravy' ary tsy niraharaha aho.” - Alan Sugar
“Heveriko fa ny tena mampiavaka ahy indrindra dia ny hoe nanambady an'io vehivavy io nandritra ny 30 taona. Tsy mahazatra izany ho an'ny olona manan-karena sy mahomby tahaka ahy. Saingy izany dia satria nitana ny soatoavina mitovy amiko aho fony aho nipetraka tao amin'ny trano filankevitra. ” - Alan Sugar
“Heveriko fa i Karl Marx no niteny hoe: 'Misambotra trondro olona, ​​azonao amidy aminy. Ampianaro lehilahy iray manarato, manararaotra varotra be ianao. '” - Alan Sugar
"Narary aho nametraka vola tao am-paosin'ny olona rehefa fantatro fa afaka mahazo vola bebe kokoa ho an'ny tenako." - Alan Sugar
"Tsy ho afaka hijanona amin'ny fizotran'ny olon-kafa mihitsy aho." - Alan Sugar
"Olom-barotra aho fa tsy akademika." - Alan Sugar
"Mino mafy aho fa, raha mahazo an'ity ianao dia hanana fahatsapana an-kibony, hanoanana ao an-kibonao - ary ho fantatrao fa te-ho tompon'andraikitra anao ianao." - Alan Sugar
"Mino mafy aho amin'ny fototra mafy orina - ary hanompo ny fianakavianao sy ny vondrom-piarahamoninao ary amin'ny alàlan'ny tadiavinao, ny firenenao sy ny taranaka ho avy." - Alan Sugar
"Reraka aho ary reraka mandritra ity resaka fanaovana firaisana ara-potoana rehetra ity ary hanao izay iriko hatao tsara." - Alan Sugar
"Mahitsy aho, tsy sahy ary tsy ho malaza foana aho." - Alan Sugar
“Efa niasa aho hatramin'ny 12 taona lasa. Raha misy fotoana sy fangatahana dia ho any aho. ” - Alan Sugar
"Matetika aho no nilaza tamin'ny olona fa tsy dia namaky boky be loatra aho satria namaky tamina birao iray teo amin'ny birao." - Alan Sugar
"Nandany ny asa aman-draharahako aho tamin'ny fanomezana vola tsara, ary manantena aho fa tsy hiala amin'izany etika izany." - Alan Sugar
“Raha manapa-kevitra ny hiara-miasa amin'ny mpiara-miasa ianao, dia fantaro fa hainao ny fahaizany. Aza hadino ihany koa mba hahitana raha tena volamena daholo izay rehetra glitters. ” - Alan Sugar
“Raha mankafy izay ataonao ianao, dia aza matahotra milaza ny hafanam-ponao. Areti-mifindra ny fifaliana. ” - Alan Sugar
"Raha mitandrina ny toetranao ianao dia hisolo tena ny lainao." - Alan Sugar
“Any Etazonia, samy mieritreritra ny tenany fa mpandraharaha izy ireo. Izay no olana. Tsy lohateny hoe izay tokony hiantso ny tsirairay avy. ” - Alan Sugar
"Lalana tsotra amin'ny raharaham-barotra io: tsy misy fidiram-bola midika fa voatery manapaka sy mihazakazaka ianao." - Alan Sugar
"Tsy tsara ny mijery ny maimaika hamita fifanarahana." - Alan Sugar
"Mora ny olona ny manome tsiny ny olona ambony indrindra rehefa tsy tsara ny zavatra fa ny zavatra jerenao lalindalina kokoa no olana." - Alan Sugar
"Mianara amin'ny hadisoana ataonao, miaraha miasa amin'ny olona mizara ny fahitanao sy ny kolontsainanao fotsiny ary mifantoka amin'ny mpanjifanao." - Alan Sugar
“Avelao ny mpandresy handresy zavatra… Tsapako fa tsy olona mpanao ady totohondry tsara izany any an-joro; raha tena te hahita fahombiazana ianao dia avelao izy ireo handresy kely ary avelao hivoaka tsara izy ireo. ” - Alan Sugar
"Tiavo izay ataonao ary ataovy ny tianao, fa raha tsy izany dia ho lasa tsy sambatra sy maharesy ny tenanao ianao." - Alan Sugar
"Tsy maninona ny vola fa rehefa manana izany ianao dia hianatra fa tsy io ihany ary mifarana daholo." - Alan Sugar
“Nanao izay fara heriny ny ray aman-dreniko, nefa tsy nahavita izay tadiaviko, no nahatonga ahy tapa-kevitra ny hanao zavatra ho an'ny tenako - mahavita tena. - Alan Sugar
"Tsy ny orinasako tany am-boalohany no nahazo vola na nanoritra ahy tamin'ny lamosiko." - Alan Sugar
“Tsy ny rehetra no mila mankany amin'ny oniversite; afaka mivoaka izy ireo ary manomboka miasa avy hatrany. ” - Alan Sugar
"Rehefa manapa-kevitra ny hiasa ho an'ny tenanao ianao dia tsy miverina miasa amin'ny olon-kafa intsony." - Alan Sugar
"Ny fahantrana dia tsy antony amin'ny heloka bevava." - Alan Sugar
"Apetraho ny olon-tianao, fa tsy ny tombom-barotra fidinao, afovoany." - Alan Sugar
"Ny fitokisan-tena dia fahaiza-manao ho an'ny fahombiazan'ny orinasa." - Alan Sugar
"Izany no zava-misy mahomby amin'ny asa - mikaroka fotoana vaovao ary manararaotra azy ireo." - Alan Sugar
"Ny hafa dia mety ho hafa, ny tontolo iainana mety hafa, saingy ny fampisehoana sy ny fahaizana mivarotra dia mitovy" - ary aza avela hisy hiteny aminao hafa raha tsy izany. " - Alan Sugar
“Ao aminao ny firafitry ny mpandraharaha. Tsy azonao atao ny mianatra azy, tsy afaka mividy izany ianao, tsy afaka mametraka azy ao anaty tavoahangy iray. Tao izy vao mivoaka. ” - Alan Sugar
"Ny fivoaran'ny fianakaviana dia tokony hiasa mafy satria tsy misy fomba hafa ahazoana vola." - Alan Sugar
"Ny hany olona manahy ahy dia ny vadiko sy ny zanako ary ny mpiara-miasa amiko." - Alan Sugar
"Ny karazan'olona misy ahy - mila fantariko izay rehetra mitranga ao amin'ny orinasako ..." - Alan Sugar
“Tsy menatra ny mijery ny mpifaninana aminao na ny famakiana ny fironana sy hevitra vaovao. Manokana fotoana sarobidy amin'ny fampiratiana. ” - Alan Sugar
"Betsaka ny kolontsaina misy ao, ilay antsoiko hoe kolontsaina antenaina, amin'ny zavatra omena." - Alan Sugar
“Mba ho mpandraharaha mahomby, dia mila mihoatra noho ny fifaninanana fotsiny ianao. Mila miafina toy ny rhino, ny fahaizana mikasa ny fivoahana ivelan'ny zanan'ny fampiononana mahazatra, ny fahavononanao mamorona ireo fitsipika, ary ny fahatokisanao tanteraka sy tanteraka tanteraka - manohitra ny fanoherana rehetra. Ny faharesen-tena dia fahaiza-manao ho an'ny fahombiazan'ny orinasa. ” - Alan Sugar
“Ny ilainao dia ny fanapahan-kevitra lehibe kokoa. Faniriana sy finoana lehibe tokoa. Ary sombin-tsoa iray ihany. " - Alan Sugar
“Tamin'izaho nanomboka voalohany dia tsy te hahavita vola an-tapitrisany aho, tsy nieritreritra ny hanana Knight. Izy io dia teo am-pandehanana kodiarana vitsivitsy. Te hanana fiara aho - ary te hahaleo tena aho. ” - Alan Sugar
"Fa maninona no miasa rehefa afaka mameno endrika vitsivitsy ianao ary tsy mahazo manao na inona na inona?" - Alan Sugar
"Ianao irery no mahalala ny tokony hatao amin'ny orinasanao." - Alan Sugar
“Tsy afaka mianatra ho mpandraharaha ianao amin'ny famakiana boky iray. Azonao atao ihany ny mahita azy rehefa manandrana. ” - Alan Sugar
“Tsy afaka manao olona ho mpandraharaha ianao, toa ny tsy ahafahanao manao olona mpihira pop na mpanakanto. Tsy maintsy namboarina ao anatiny; karazana orona ho an'ny zavatra izany, fofona manitra ny zavatra, ary avy eo voajanahary hanao izany ary mifantoka. ” - Alan Sugar
“Tsy tokony hatahotra ny fampahalalam-baovao ianao raha tsy misy zorony ao anaty kaopy… Ny marina dia… Tsy manana miafina aho.” - Alan Sugar
"Tsy maintsy mandoa ianao, ary tsy afaka mandoa fotsiny ianao raha mivarotra ary, izany hoe, mahazo tombony aho fa tsy avy amin'ny fiovana. - Alan Sugar]
“Aza miantehitra amin'ny olon-kafa. Ho anao izay mamaritra ny mandroso. ” - Alan Sugar
“Mila manokana andro iray isan-kerinandro ianao amin'ny fisarahana amin'ny asan'ny orinasa iray. Tsy maintsy manana olona ao anaty ilay orinasa atokisanao ianao. Sanatria amiko! Sanatria ianao hamonjy fiara fitaterana 6. Saintsaino io olona io, izay tokony hifehy ary hametraka an'io olona hitantana io mandritra ny andro iray. ” - Alan Sugar
"Tsy fantatrao mihitsy hoe rehefa misy zavatra voatahiry ao an-tsainao dia afaka milalao hatramin'ny raharaham-barotra." - Alan Sugar
“Na nanana fanatanjahantena ianao na tsia. Mipetraka ao anatinao ary nateraky ny hevitra tonga amin'ny toe-javatra samihafa iainanao. ” - Alan Sugar
“Tsy tokony hieritreritra intsony ireo tanora lasa Zuckerberg manaraka. Vintana an'arivony tapitrisa io. Ny ilain'izy ireo dia ny mater sy ny pater hiteny hoe: 'Makà asa, anaka.' ” - Alan Sugar
"Ny mpijery antonony anao dia tsy mahita mihoatra noho ny fitadiavana asa ary miasa ho an'ny olon-kafa. Ny raharaham-barotra dia raisina ho mampidi-doza - ary matahotra ny olona handray andraikitra raha tsy mahomby izy ireo. Ho fantatrao ny buzz rehefa nanao zavatra manokana ianao. Amin'ny fomba mahatsikaiky, maka toerana faharoa ny vola. ” - Alan Sugar
Alan Sugar Net mendrika mendrika 2022